Madaxwaynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis: “Chelsea weli dalab uma soo dirin Maurizio Sarri” - Jubbaland TV
Madaxwaynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis: “Chelsea weli dalab uma soo dirin Maurizio Sarri”
By admin June 23, 2018 458
Madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa hoosta ka xariiqay soo jeedinta ay Chelsea ku dooneyso inay ku magacawdo Maurizio Sarri tababaraha cusub ee kooxda.
Sarri ayaa horay uga soo tagay Napoli iyadoo Carlo Ancelotti loo badinayo inuu bedel u yahay, laakiin kooxda Serie A ayaa weli ah magdhow lacageed haddii Sarri uu ku biire doono koox kale.
Wararka ayaa soo jeedinaya in Chelsea ay horumar ka sameysay isku daygeedii ay ku dooneysay inay isbedel ku sameyso kubada cagta, laakiin De Laurentiis ayaa ku adkeysanaya in aysan jirin xiriir ka dhaxeeya Premier League.
De Laurentiis ayaa u sheegay Sky Sport24: “Wicitaanka ka yimid London ayaan imaanin” ka hor inta uusan hadalkiisa raacin “waqti uun ayaa u sheegi doona hadii Chelsea ay dooneyso inay dhameystirto heshiiska.
Chelsea ayaan weli saxiixyo xagaagaan laakiin waxaa la soo jeediyay in Sarri uu jeclaan lahaa inuu afar ciyaaryahan ka keeno kooxdiisii hore.
Manchester City Iyo Paris Saint-Germain Oo Isku Heesta Saxiixa Daafaca Kooxda Bayern Munich
Real Madrid Oo La Soo Saxiixatay Goolhayaha Lagu Magacabo Andriy Lunin
Casemiro oo dil ugu han jabay mid ka mid ah Xiddigaha Kooxda Juventus,+muuqaal